Dareemida Machine CDD-3 - Shiinaha Dongguan Yuechuang is
Ka dib-iibka Service
Auto mashiinka shirka isku xira
RJ45 qalabka qalabaynta isku xira
More Intelligent Oo hufan hab-soo-saarka isku xira gaariga.
RJ45 qalabaynta isku xira ...
qalabka Inspection / ...
Automatic Farsamada Qalabka sameeyey Shiinaha la hi ...
Automaton for Automotive isku xira MQB
Dareemida Machine CDD-3
Qalabka farsamo for Automotive isku xira RJ45-2
Electric Ford Automobile Qaybo Fiting nabadgelyada
Machine Dareemida CDD-3
Tani mashiinka baaritaanka iswada waxaa caadadiisu loogu talagalay iyo dhisay by Yue Chuang in la sameeyo baaritaanno hadda on taarikada yar.
Tani waxay si buuxda u iswada, saxan mashiinka baaritaanka hadda caadada u yar ayaaba dhowr baaritaan oo muhiim ah hadda korontada iyo badbaadiyay dhammaan xogta. Ka hor inta aan imtixaanka, taargooyinka yar waxaa la geeyaa galay munaaraddii magazine halkaas oo nidaamka ka qaadan kartaa, imtixaanka oo ku baddallo in jeebka la mid ah.
Mashiinka shirka full-automatic ka dhigaysa wax soo saarka sare, kharashka soo kabsaday u rumowdo sanadkii tan iyo mishiinka bilaabay in ay ka shaqeeyaan.
hawlgalka buuga keliya loo baahan yahay in kabka qayb. aad bay u yareeyo kharashka shaqada, habka machining multi-yada la fududeeyey karo oo nooc kala duwan ee qaybaha baabuurta la soo saaray laga yaabaa.
oo dhan qaybo ka mid ah nidaamka korontada iyo xoog waxaa laga keeno la baakadahooda, taasoo loo hubiyo tayada sare ee mashiinka.
Previous: Qalabka farsamo for Automotive isku xira RJ45-2
Next: Qalabka sii kordhaya
Qalabka sii kordhaya
Auto Assembly Machine Connector Automation Mach...
Ford-2 Automotive Linker ururiyaha Professional ...
Connector Assembly Machine Car Connector
System AutomaticTesting CDD-2
Electrical Connector Automatic Assembly Machine
Yuechuang mashiinka shirka isku xira auto
qalabka Inspection ...
Auto shirka isku xira ...
Cinwaanka: Dongguan Yuechuang is Qalabka Co., Ltd.
Copyright 2018 Dongguan Yuechuang is Qalabka Co., Ltd.